Ahoana no ahafahan'ny mpivarotra miaro ny fatiantoka amin'ny efitrano fampirantiana | Martech Zone
Mandehana manaraka ny sisin'ny fivarotana biriky sy mortara rehetra ary mety hisy izany, dia hahita mpivarotra iray izay mibanjina ny masony amin'ny findainy ianao. Mety mampitaha ny vidiny any Amazon izy ireo, mangataka tolo-kevitra amin'ny namana iray, na mitady vaovao momba ny vokatra manokana, saingy tsy isalasalana fa ny fitaovana finday dia lasa ampahany amin'ny traikefa ara-batana. Raha ny marina dia maherin'ny 90 isan-jaton'ny mpividy no mampiasa finday finday rehefa miantsena.
Ny fiakaran'ny fitaovana finday dia nitarika ny fisian'ny fampirantiana, izay rehefa mividy vokatra ao amin'ny magazay ara-batana ny mpividy nefa mividy azy amin'ny Internet. Araka ny fanadihadiana nataon'ny Harris, efa ho ny antsasaky ny mpiantsena-46% -showroom. Rehefa nahazo vahana ity fanao ity dia nanomboka fahaverezana sy fahitana faminaniana momba ny fomba hamotehany ny fivarotana ara-batana.
Mety mbola tsy nitranga ilay apokalipsy fampirantiana, saingy tsy midika izany fa tsy hahavery orinasa ny mpifaninana aminy ny mpivarotra ambongadiny. Ireo mpanjifa dia tsy hijanona amin'ny fampiasana findainy hanampiana azy ireo rehefa miantsena. Ireo mpivarotra ankehitriny dia saropady amin'ny vidiny ary te hahafantatra fa mahazo ny fifanarahana tsara indrindra izy ireo. Raha tokony hiezaka ny tsy hiraharaha na hiady amin'ireo fitaovana finday eny an-tsena (izay fanatanjahan-tena tsy misy dikany), ny mpivarotra dia tokony hiezaka hanome antoka fa rehefa mampiasa mpivarotra finday ao anaty magazay ny mpivarotra dia mampiasa ny rindrambaiko manokana an'ny mpivarotra izy ireo fa tsy an'ny olon-kafa. .
Approoming - Ny fampifanarahana amin'ny vidin'ny fampiharana amin'ny fivarotana
Hainay ny Showrooming sy ny mifanohitra aminy webrooming - izay ahitan'ny mpivarotra entana an-tserasera, saingy amin'ny farany izy dia mividy azy amina fivarotana. Samy miantehitra amin'ny mpividy mahita zavatra amin'ny sehatr'asa iray izy roa nefa mividy amin'ny sehatra hafa mihitsy. Fa ahoana kosa raha toa ny mpivarotra am-pitandremana manamboatra ny fampiharana azy ireo ho toy ny fanitarana ny efitrano fampirantiany ary mandrisika ny mpiantsena hiditra amin'ilay fampiharana rehefa eny an-tsena. Araka ny voalaza etsy ambony, ny antony lehibe mahatonga ny mpivarotra hiroborobo amin'ny seho fampisehoana dia ny hijerena raha toa izy ireo afaka mahazo fifanarahana tsara kokoa amin'ny mpivarotra mpifaninana na mahazo serivisy tsara kokoa. Ireo mpivarotra antsinjarany dia afaka misoroka ny fahaverezan'ny orinasa amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fampitahana ny vidiny sy / na ny fampiasa mifanaraka amin'ny vidiny ao amin'ny fampiharana azy ireo, izay manakana ny mpiantsena tsy hitady any an-toeran-kafa hanao ny fividianany - na inona na inona fantsona ahitany ny vokatra.
Ohatra, ny fampifanarahana ny vidiny dia olana lehibe ho an'ny mpivarotra elektronika. Mandeha amin'ny fivarotana ny olona, ​​mahita ny fahitalavitra tiany hovidiana, avy eo mijery ao amin'ny Amazon na Costco izy ireo raha toa ka afaka mahazo fifanarahana tsara kokoa amin'izany. Ny mety tsy fantatr'izy ireo dia mety manana tapakila, tolotra ary valisoa azo antoka ny mpivarotra izay manome vidiny ny fahitalavitra ambanin'ny fifaninanana, tranga iray very rehefa mampiasa fitaovam-pikarohan'ireo mpifaninana. Tsy misy ny tolotra manokana, ny mpivarotra dia mety manana antoka fampifanarahana vidiny ihany koa, saingy mitaky mpiara-miasa aminy ny mahita porofo fa misy ny vidiny ambany kokoa amin'ny fifaninanana, dia mila mameno taratasy izy ireo amin'izay ny vidiny vaovao dia azo taratra amin'ny ora fisoratana anarana alohan'ny hamelana ny mpanjifa hividy. Betsaka ny disadisa tafiditra amin'izany, satria izay mety ho lalao mifanentana omen'ny mpivarotra na aiza na aiza. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny rindrambaiko Mpivarotra hividianana automatique mifanandrify amin'ny vidiny, ny fizotrany rehetra dia mety hitranga afaka segondra vitsy - ilay mpivarotra dia mampiasa ny App an'ny Mpivarotra mba hizaha ny vokatra sy hahitana ny vidiny atolotray azy ireo aorian'ny fampifanarahana azy amin'ireo mpifaninana an-tserasera, nampiana ho azy ny vidiny vaovao amin'ny mombamomba ny mpivarotra ary voatendry ho azy ireo rehefa feno ny fizahana.
Ny serasera no ilaina eto. Na dia manolotra endri-javatra fampitahana vidiny aza ny mpivarotra dia tsy ho fantatra izany raha tsy fantatry ny mpivarotra izany. Ny marika dia tokony hampiasa vola amin'ny fampahafantarana ny fiasan'ny fampiharana azy ireo ka rehefa mihetsika ny efitrano fandraisam-bahiny ny mpiantsena, izy ireo Approom fa aleo mijanona ao anatin'ny tontolo iainan'ireo mpivarotra.
Ny lalao fivarotana
Raha vantany vao entina any amin'ny tontolon'ny finday ny mpividy, angamba amin'ny alàlan'ny tranokala mahomby, misy fomba maro hafa ahafahan'ny mpivarotra mifampiresaka amin'izy ireo. Azonao atao ny mangataka amin'ireo mpividy mba hijery taratra ireo zavatra sy hanatsara ny lafiny fizarana fiantsenana ao amin'ny magazay. Ny vidiny tsy ampoizina, ny tolotra vidiny eo noho eo ary ny tolotra mavitrika miorina amin'io mpivarotra manokana io izay mampientanentana ny mpivarotra sy mandray anjara.
Ankoatr'izay, ny firotsahana fampiharana dia manome fahatakarana bebe kokoa ireo mpivarotra hoe iza ny mpividy azy. Alao an-tsaina hoe misy mpampiasa tonga ao amin'ny magazay, manara-maso zavatra iray ary mahazo vidiny manokana miova isaky ny andro. Arakaraka ny hamaritan'ny olona ny fampiharana ny scan ny entana no ahazoan'ny mpivarotra antsinjarany ny mpanjifany. Ary ny mpanjifa akory tsy mila manao fividianana na scanna. Azon'izy ireo atao ny mahazo isa ny tsy fivadihana, izay mamorona andiana mofomamy maromaro ho an'ny entana ao anatin'ny magazay. Afaka mampiasa izany angona izany ireo mpivarotra mba hahalalana hoe inona ireo entana mafana ary inona no tena vidin'ny mpanjifa. Raha misy singa manokana misy tahan'ny fiovam-po ambany dia afaka mihazakazaka ny mpivarotra Analytics mba hahitana ny antony. Raha misy vidiny tsara kokoa amin'ny mpifaninana iray, ny mpivarotra dia afaka mampiasa izany fampahalalana izany mba hampihenana ny vidin'izy ireo manokana, ary noho izany dia mijanona ho mpifaninana.
Fomba iray hafa ahafahan'ny mpivarotra misoroka ny fatiantoka amin'ny efitrano fampisehoana amin'ny alàlan'ny fanangonana entana. Ireo entana ao am-pivarotana dia azo fehezina amina entana izay tsy entina ao amin'ny magazay, saingy mety tsara izany zavatra izany. Raha misy mividy akanjo, ny fonosana dia mety ahitana kiraro mandrindra izay azo avy amin'ny trano fanatobiana foibe fivarotana. Na raha nisy nividy kiraro iray, dia mety nisy ba kiraro ilay fonosana - ny karazany sasany dia azo namboarina tanteraka araka izay tian'ny mpivarotra ary nalefa tany an-tranony. Ny fampiharana dia fotoana mety hamoronana fonosana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa, ary amin'ny fanaovana izany, tsy hampitombo ny varotra fotsiny, fa hampihena ny vidiny ihany koa amin'ny famerana ny SKU izay entina mitahiry mifanohitra amin'ny trano fanatobiana entana.
Ankoatr'izay, ny fonosana dia azo omena mba hampidirina amina orinasa sy mpiara-miasa eo an-toerana izay manolotra vokatra sy serivisy tokana mifanaraka amin'ny entan'ny mpivarotra. Diniho ny mpivarotra fanatanjahantena. Raha manandrana mividy andiana ski ny mpanjifa, ny fampiasa amin'ny fampiasa amin'ny fampiasa amin'ny app dia mety hanampy azy ireo hanaraka ny fizotran'ny fanapahan-kevitra amin'ny alàlan'ny fanolorana karazan-tehezana sahaza indrindra ho an'ny ski ary hanomezana fonosana mandritra ny faran'ny herinandro. Ny fiaraha-miasa amin'ny antoko fahatelo izay mamela ny mpivarotra manolotra fifanarahana fonosana mamorona fifaninanana izay mahasoa kokoa ny mpivarotra noho ny mividy zavatra iray fotsiny.
Ny sarety Omni-Channel
Farany, ny mpivarotra dia afaka misoroka ny fatiantoka fampisehoana ary manatsara ny tombony azo amin'ny fankatoavana amin'ny alàlan'ny famoronana sarety omnichannel. Amin'ny ankapobeny, ny sarety ara-batana any anaty magazay sy ny sarety an-tserasera dia tokony ho lasa iray. Ny fivezivezana eo an-tserasera sy ivelan'ny Internet dia tokony ho traikefa tsy misy tohiny ary tokony hanana safidy eo am-pelatanany ny mpanjifa. Androany dia BOPIS (Buy Online Pickup In Store) no fahatezerana rehetra. Saingy ny traikefa dia tapaka indray mandeha any am-pivarotana, satria mety hahita entana fanampiny tadiavin'izy ireo ny mpividy, saingy mila mijoro indroa indroa izy izao hahazoana ireo entana ireo. Raha ny tokony ho izy dia tokony ho afaka mankamin'ny Internet ny lalan'izy ireo mankany amin'ny BOPIS izy ireo, avy eo manatona ny magazay ary mahita entana fanampiny tadiaviny, manampy azy ireo amin'ny saretiny ara-batana izay ampandehanan'ny Fampivarotana, ary avy eo mamita ny fizahana ho an'ny BOPIS sy In Tehirizo amina tsindry tokana ireo entana ao amin'ny tobin'ny fizahana iray.
Amin'ny farany, ny zavatra iainan'ny mpanjifa no zava-dehibe indrindra
Nanjary niainany manokana ilay magazay ara-batana — jereo fotsiny ny isan'ny mpivarotra an-tserasera voalohany manokatra toerana biriky sy mortara. Ireo mpivarotra dia te hiaina ny fikitika, ny fahatsapana, ny fijeriny ary ny fofon'ireo vokatra ary aza manahy momba ilay fantsona. Ny fifaninanana amin'ireo mpilalao an-tserasera amin'ny vidiny dia hazakazaka hatrany ambany. Mba hitazomana ny orinasany, ny mpivarotra dia mila manolotra traikefa an-tserasera mahasarika amin'ny Internet izay manome lanja sy fanamorana ampy izay tsy alehan'ny mpanjifa any an-toeran-kafa.
Tags: app vidinyvidiny miorina amin'ny fampiharanafankatoavanafamatoranafitadiavana mpanjifalalao fivarotanaahoana novidiny amin'ny fampiharanafatiantokasarety omni-fantsonaPricingvidin'ny vokatratraikefa an-tsenafampirantianafatiantoka fampisehoana